Norwey:- Ciidamada Booliska Norwey oo guri ay deganaayeen qoys Soomaali ah qasab uga saaray. | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News Norwey:- Ciidamada Booliska Norwey oo guri ay deganaayeen qoys Soomaali ah qasab...
Norwey:- Ciidamada Booliska Norwey oo guri ay deganaayeen qoys Soomaali ah qasab uga saaray.
Oslo:- Qoys ka kooban afar caruur ah, hooyo iyo aabahood oo Soomaali ah ayaa si qasab ah looga saaray guri ay deganaayeen in ka badan 10 sano kadib markii ciidamada booliska ay qasab kaga saareen gurigooda taasi oo lama filaan iyo naxdin ku noqotay qoyska iyo dhamaan dadkii dariska la ahaa.
Arintaani ayaa timid kadib markii qeybta guryaha qaabilsan Xaafada Tøyen ee degmada Oslo ay ku wergelisay familka Soomaaliga in ay ka guuraan guriga maadaama familka uu batay gurigana ay ku noolyihiin dad badan iyo caruur da, ahaan kortay.
Aabaha qosykaan oo lagu magacaabo Maxamed Jaamac 44 jir ah ayaa Tv2 u sheegay in uu Kamuunaha (Degmada) Oslo ka dalbday guri kan ka weyn balse uusan weli helin jawaab, isagoo intaasi ku daray in isniintii lasoo dhaafay uu helay taleefan ay u soo direen qolooyinga guryaha kuwaasi oo ku wargeliyay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay alaabtooda uga xir xirtaan guriga.
Aabe Jaamac ayaa sheegay in wax ka yar nuc saac loogu qasbay in ay ku xir xirtaan alaabtooda taasi ku dhalisay naxdin iyo wel wel badan, xiligaasi kadib ay caruurtu soo qaateen wixii ay awoodeen oo ay ka mid ahaayeen computaro iyo qaar ka mid ah buugaagtii waxbarashada.
10 ilaa 8 askari oo ka tirsan ciidamada booliska ayaa dulyimid reerka kuwaasi oo ku amray in ay ka guuraan guriga, waxaana Arinta ugu saameynta badan ay aheyd in xiliga ay boolisku imaanayeen guriga qoyska Soomaalida ay qaar ka mid ah Caruurtu ku jireen waxbarashada online-ka ah maadaama iskuulada Norwey ay u xiranyihiin sababo la xariira Covid 19.
Hooyada iyo aabaha qoyskaan ayaa qaba cudurka macaanka wiilkooda ugu yarna waxa dhibta neefta,. Waxaana hadii banaanka loo saaro soo wajihi karta dhibaato caafimaad maadaama ay ka mid yihiin dadka halista ugu jira Coronaveirus.
Xiliga boolisku ay sameeyeen arintaani ayaa ku hor dhacday caruurta horteeda wallow wiilka ugu yar xiligaasi uu iskuulka jiray maadaama caruuta aadka u yar iskuuladoodu ay furanyihiin.
“ Waxaan ku faraxsanahay in wiilka ugu yar uusan joogin guriga oo uu iskuulka jiray xiliga ay arintaani dhacyesay, ma garan gari dhaawaca maskaxeed ee gaari lahaa hadii uu joogi lahaa xiliga ay sheekadaani dhaceysay ” ayuu yiri Aabe Jaamac oo la hadlayay Tv2.
Maryam Xuseen oo ah gabar u tartameysa kurisga xildhibaanimo ee xisbiga SV ayaa sheegtay in loobahanyahay in caruurtu ay awood u yeeshaan waxbarashada guriga lagu qaato, hadii laga soo saaray gurigana ay noqoneyso arin dhibaato keeni karta.
Waxa ay deganyihiin qoyskaani xaafada Tøyen oo ka mid ah xaafadihii hore ee Oslo halkaasi oo dhawaan laga calaamadeeyay in ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee saameyn uu ku yeeshay cudurka Covid 19.
Reerkaani ayaa waxaa codsi hore ee ay u dirsadeen guriga laga siiyay diidmo taasi oo keentay in haatan guriga xoog looga saaro, waxaana qurbaha.net uu isku dayi doona in uu wareysi ka soo qaado reerkaan inta ay xaaladaani taagantahay.
Xigashada Warkaan waa TV2
Previous articleBlast hits local gov’t office in Somali capital
Next articleQoyskii Soomaalida ee Guriga qasabka looga saaray oo deg deg u heley lacag ay Guri ku iibsan karaan.